Seranam-piaramanidina Ngurah Rai (Denpasar, Bali) " Journey-Assist - Scheme. Scoreboard an-tserasera
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Seranam-piaramanidina Ngurah Rai (Denpasar, Bali)
Airport Bali, Denpasar - Ngurah Rai
Seranam-piaramanidina Denpasar. Bali - Ngurah - Rai.
Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Ngurah Rai, fantatra ihany koa amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Denpasar.
Kaody iraisam-pirenena: DPS
Seranam-piaramanidina ao Tuban
Distance amin'ny Depasar (renivohitra Bali) - 12,2 km
Ny halaviran'ny tanànan'i Kuta - 2,5 km
Ny halaviran'ny tanànan'i Jimbaran - 10,7 km
Ny seranam-piaramanidina dia nantsoina hoe Ngurah Rai ho fanomezam-boninahitra an'i Yi Gusti Ngurah Rai, ilay maherifo nasionalin'ny Indonezia.
Misy seranana roa ny seranam-piaramanidina Ngurah Rai. Ny iray ho an'ny sidina iraisam-pirenena, ary ny faharoa ho an'ny sidina an-trano.
Drafitra ny terminal iraisam-pirenena Ngurah Rai (Bali, Indonezia)
Ny drafitry ny rihana voalohany amin'ny terminal international an'ny seranam-piaramanidina Bali - Ngurah Rai
Scheme an'ny rihana faharoa amin'ny terminal international an'ny seranam-piaramanidina Bali - Ngurah Rai
Serivisy ao amin'ny seranam-piaramanidina Ngurah Rai
Izay rehetra ilainao ao amin'ny seranam-piaramanidina dia eto:
Kafe, fivarotana (ao anatin'izany ny Duty free), ATM, efitra fidiovana ary salons SPA ihany koa.
Amin'ny sisiny roa amin'ny seranam-piaramanidina dia misy birao sisa tavela.
Serivisy fitehirizana entana - 50 000 rupees / isan'andro
Ny biraon'ny ankavia dia miasa manodidina ny famantaranandro, ary tsy misy famerana amin'ny fiainana
Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny seranam-piaramanidina
Ireo ATM, ary koa ny fifanakalozana fifanakalozana vola dia misy ao amin'ny faritra fandehanana sy fahatongavana.
Fa tokony ho marihina fa ny tahan'ny fifanakalozana dia hafa noho ny tahan'ny ao an-tanàna, noho izany, raha miova ianao dia manoro hevitra izahay mba hanova ny kely indrindra ilaina indrindra.
Sampana banky ao amin'ny seranam-piaramanidina Ngurah Rai
Ao amin'ny terminal iraisam-pirenena dia misy sampana amin'ny banky eo an-toerana: Mandiri и BNI.
Taxi amin'ny seranam-piaramanidina Bali
Ho an'ireo mpandeha tsy monina any Indonezia dia misy ny birao fandoavana hetra manokana - ilay antsoina hoe Free Tax.
Miasa hetra maimaim-poana i Ka
Miaraka amin'ny sandan'ny fividianana mihoatra ny Rs 500 mandritra ny 000 andro, dia azo atao ny miverina ny sandan'ny hetra fanampiny.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy atolotra ao amin'ny biraon'ny fadin-tseranana ny pasipaoro iray, taratasim-bola, famenoana endrika maimaim-poana amin'ny hetra manokana, ary avy eo ao amin'ny teboka VAT Refund ho an'ny mpizahatany.
Serivisy seranam-piaramanidina VIP ho an'ny tompona Pass prioritas
Ireo mpihazona laharam-pahamehana Prix eo amin'ny seranam-piaramanidina dia manana faritra misy trano fisakafoanana VIP telo.
Vidiny adiny iray - $ 9 (olon-dehibe)
Adiny iray amby zato - $ 5 (ho an'ny ankizy)
Ny vidiny etsy ambony dia Wi-Fi, zava-pisotro, fahitalavitra, telefaona, efitrano fandraisam-bahiny sy efitrano ho an'ny ankizy.
Efitra manodidina ny efitrano misokatra.
Ho fanampin'izany, ho an'ny $ 50, dia misy afaka mahazo fanampiana ilaina rehefa miditra na manala amin'ny fisavana na kitapo, alohan'ny handalovana ny fifehezana pasipaoro na fandehanana amin'ny fiara vaventy na famindrana fiara.
Ho an'ireo mpandeha manana zaza
Ao amin'ny terminal anatiny (marary) dia misy efitrano roa ho an'ny ankizy - eo amin'ny fidirana nomerao 6 sy 1A.
Ao amin'ny terminal ho an'ny sidina iraisam-pirenena, ny laharana fivoahana 5 dia manana efitran'ny ankizy iray ihany koa.
Ny efitrano etsy ambony dia miaraka amin'ny zavatra rehetra ilainao: ny latabatra miova, ny rano mafana sy mangatsiaka, cot, sofa, kitapo fanampiana fanampiana.
Aterineto ao Ngurah Rai
Mandritra ny seranam-piaramanidina dia misy maimaimpoana ary miaraka amin'izany fotoana izany dia miditra amin'ny Wi-Fi avo lenta.
Sakafo ao amin'ny seranam-piaramanidina
Betsaka ny kojakoja famerenam-bary ao amin'ny sisiny roa, toa ny kafe sy ny trano fisakafoanana miaraka amin'ny sakafo asera aziatika, eoropeana ary amerikana. Tsy sarotra ny mahita toeram-pametrahana miaraka amin'ny sakafo nahandroana zavamaniry sy saosy.
Ny ankamaroan'ny kafe sy bar dia misokatra manodidina ny famantaranandro.
Ahoana no hidirana sy avy amin'ny seranam-piaramanidina mankany an-tanàna
Avy amin'ny seranam-piaramanidina Ngurah Rai dia afaka mandroso mora foana any amin'ny tanàn-dehibe any Bali ianao miaraka amin'ny fiarakaretsaka na fitateram-bahoaka. Na handamina famindrana any amin'ny hotely.
Afaka miditra ao amin'ny seranam-piara-manidina mankany Denpasar, Kuta, Ubud ianao ary miverina amin'ny fiarakaretsaka, fitateram-bahoaka na manomana famindrana mivantana any amin'ny hotely.
Misy ny fiantsonana manokana eo amin'ny faritra tonga.
Ny kaomandy farafahakeliny dia 45 000 rupees isaky ny fametrahana + 6 500 rupees iray kilometatra.
Rehefa afaka 15 minitra, ohatra, ny dia iray any Denpasar dia handany vola manodidina ny 130.
Ary koa, ivelan'ny seranam-piaramanidina dia azonao atao ny mampiasa orinasa taxi sy be tetika kokoa amin'ny nosy iray manontolo - Blue Bird
Ny dia mitovitovy amin'ilay ohatra etsy ambony dia mitentina 120 rupees
Eo akaikin'ny seranam-piaramanidina dia misy fijanonana ho an'ny orinasan-bus eo an-toerana - Trans Sarbagita.
Mandeha amin'ny lalana mandalo ny seranam-piaramanidina manomboka amin'ny 5.00 ka hatramin'ny 21.00 ny fiara fitaterana
Ny fijanonana dia eo akaikin'ny terminal no misy sidina an-trano.
3500 ropia ny saran-dalana.
Eo koa ny minibus Bemo eo amin'ny seranam-piaramanidina (Public Bemo). Tsy mitondra fiara amin'ny fandaharam-potoana izy ireo, fa rehefa mameno ny seza misy azy (seza 12)
4000 ropia ny saran-dalana.
Mitranga izany fa ny sandany nambara ho an'ny vahiny dia avo kokoa, saingy fantaro fa efa fikasan'ny mpamily izany.
Ny fomba fiasa any amin'ny seranam-piaramanidina alohan'ny hivoahany
Rehefa tonga any amin'ny seranam-piaramanidina ianao, jereo aloha ny mombamomba anao amin'ny sidina.
Ny birao dia hampiseho ny isan'ireo birao fisavana jereo amin'ny sidinao.
Rehefa vita ny fisoratana anarana dia ilaina ny manolotra pasipaoro sy tapakila.
Eto amin'ireo kaonty sarin'ireo karatra fahazoan-dàlana hidiranao ary jereo ao amin'ny entanao.
Raiso ny pasipaoronao. Ary avy eo mandehana any amin'ny efitrano fiandrasana akaikin'ny fivoahana (vavahady) mankany amin'ny fiaramanidina noho ny sidinao
Tonga eo amin'ny seranam-piaramanidina
Alohan'ny handehananao ny fanaraha-maso ny pasipaoro dia alao antoka fa fenoy ny fanambaràn'ny ladoany (mazàna dia avoaka amin'ny fiaramanidina fotoana fohy alohan'ny hidirany). Raha tsy navoaka tao anaty fiaramanidina dia azo alaina amin'ny kaontera manokana ao amin'ny faritra fanaraha-maso pasipaoro efa eny amin'ny seranam-piaramanidina mihitsy. Adidy ny mameno ny fanambarana amin'ny teny anglisy.
Ny fanaraha-maso pasipaoro.
Mahazo ny valizinao avy amin'ny fehikibo fitaterana manokana ianao. Ireo mpanara-maso ambonin'ireo kofehy dia manondro ny sidina izay hodiovina ny entany eto.
Aorian'izany dia manana ny zo hivoaka any an-tanàna ianao.
Ny fahatongavany an-tserasera sy ny filaharana
Fifandraisana sy ny fampahalalana mahasoa hafa
adiresy Bandar Udara Internasional Ngurah Rai
telefaonina +62 361 751011 EXT. 5055
GMT zona fotoana (ririnina / fahavaratra): + 8 / + 8
Ny mpandrindra ara-jeografika eo amin'ny seranam-piaramanidina: Latitude (-8.75), Longitude (115.17)
Isan'ny terminal: 2
Adiresy mailaka: Ngurah Rai Tuban, Denpasar 80361, Bail, Indonezia
Seranam-piaramanidina momba ny seranam-piaramanidina: +62 361 75 10 11
Fifandraisana momba ny seranam-piaramanidina: +62 361 75 10 11
Fax: +62 361 75 10 32
Tranonkala seranam-piaramanidina ofisialy: www.bali-airport.com/en